Qaramada Midoobay oo mudo kordhin u sameysay ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM
New york:- Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa afar bilood ku kordhiyay muddada ay ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ay ku sii sugnaan doonaan dalka Soomaaliya kuwaas oo sheega in ay howlgalo lagu taageerayo DFS iyo kuwa lagu sugano amniga ay ka wadaan gudaha Soomaaliya .
Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxay ka kala yimaadeen dalalka Ugandha ;Kenya,Burundi ,Jabuuti,Siraliyoon.iyo Naijeria kuwaas oo haatan ku sugan gobalada dalka Soomaaliya .ilaa hada ma jirto cid si cad u xaqiijin karta tirada ciidamada AMISOM ee dalka ku sugan.
Ilaa iyo Intii ay dhacaday dowladii Dhexe ee dalka Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Bare ayaa waxaa dalka ka adeeganayey dowlado iyo Ururo aan wax dan ah u heyn umada Soomaaliya iyaga oo mar walba la soo baxayey wajo kala duwan adeegsanayeyna Siyaasiyiin caado qaatayaal ah.
Golaha Amaanka ee QM ayaa ku dhawaaqay arbacadii in uu 4bilood u kordhiyey ciidamada AMISOM ka dib markii ay dowlada Ugandha ku goodisay in ay ciidamadeeda dalka ay kala bixi doono .
Umada Soomaaliyeed ayaa waxay dhibaatada heysata ay uga gudbi kartaa in ay heshiiso gacamahana is qabsato sida dalka iyo diintaba loo badbaadiyo waxaa kale oo ay guul ku gaari kartaa in ay u laabtaan diintooda kuna dhaqmaan iyaga oo marna ka tageyn wadatashiga iyo shuurada .
C/fitaax Maxamed Cali